APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ကွောဆှဲ | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ကွောဆှဲ:တိုက်ရိုက်စီးဂိမ်းဗီဒီယိုများ Watch, အားကစား, သင့်ရဲ့ Android device ကိုအပေါ်အပေါင်းတို့နှင့် IRL ထုတ်လွှင့်! သင်အကြိုက်ဆုံး MMO RPG stream, PS4 ဘို့မဟာဗျူဟာနှင့် FPS ဂိမ်း, PC ကို, Xbox One နဲ့ Nintendo ပြောင်းလဲမည်. Twitch offers live streaming and gamer chat in your palm.
Twitch Live Streaming and Gamer Chat: TOP3အင်္ဂါရပ်များ:
1. Watch Gamer Minecraft, Fortnite, PUBG, ဖီဖာ 18, League of Legends and more. Stream content from the biggest MMO RPG, MOBA, strategy and FPS games out there or invite you to nerve-wracking Esports tournaments.
2. Live chat during every gaming, အားကစား, and IRL broadcast. Talk to Hearthstone’s strategy with other players, or settle for silence with live streaming art demos.
With Twitch, you can watch players playing single or multiplayer games under the sun. With PUBG, ဖီဖာ 18, ထင်ရှားကျော်ကြားသူတို့အသင်း, Overwatch and Fortnite videos on demand, you can really make your gaming flag fly. Joinalive chat to connect with your MOBA or MMO RPG community!
Twitch: Livestream Multiplayer Games & အီလက်ထရောနစ်အားကစား by Twitch Interactive, Inc မှ.
DIRECTV NOW က APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ဗားရှင်း: 6.4.2 (604020)
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: သြဂုတ်လ 15, 2018
ဖိုင်အရွယ်အစား: 29 mb
Twitch 6.6.3 .APK ကို
Twitch 6.6.2 .APK ကို
Twitch 6.6.1 .APK ကို
ဘောလုံးကိုရိုက်! Android အတွက် – APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Clan ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၏တိုက်ပွဲဖြစ် (န့်အသတ်ကျောက်မျက်) APK ကို – Unlimited ငွေ
တွစ်တာ v2.1.2 – APK ကို Download လုပ်ပါ
Royale ပုဂ္ဂလိကဆာဗာ v1.9.2 Mod ထိပ်တိုက်တွေ့: Unlimited အားလုံး APK ကို – Unlimited
နဂါးမြို့တော် APK ကို + ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Unlimited နောက်ဆုံးဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
YesPlayer .apk ဒေါင်းလုပ် – မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး App ကို
YouTube ကို APK ကို v12.15 Download: APK ကိုအစေခံလုံခြုံမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
Xenia ကို download လုပ်ပါ: file ကိုလွှဲပြောင်း, APK ကို v3.9 ကိုမျှဝေခြင်း – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
နွယ် 2: တော်လှန်ရေး APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး…
Google ဂီတ Play (အန်းဒရွိုက်တီဗီ) APK ကိုဒေါင်းလုပ်…
FireDL APK ကိုဒေါင်းလုပ် – အခမဲ့ Tools များ APP…
ဂျီမေးလ် APK ကိုဒေါင်းလုပ် – အခမဲ့ဆက်သွယ်ရေး APP…
UkTVNow (မီးတီဗီ) .APK ကိုဒေါင်းလုပ် – အကောင်းဆုံး…